COVID-19 (xudunta karoonafayras) – Macluumaadka, Adeegyada, iyo khayraadka Gobolka Washington | Washington State Coronavirus Response (COVID-19)
COVID-19 (xudunta karoonafayras) – Macluumaadka, Adeegyada, iyo khayraadka Gobolka Washington
Adigga ama qof kale oo aad taqaano uusan guriga ka bixi karinniban tahay mana u baahan tahay talaallka COVID-19?
Saddex qaab oo la isku diiwaan gasho
Khadka tooska ah ee COVID-19: Caawi shaqaalaha, ganacsiayda, balamaha talaaka iyo inkabadanba
Haddii aad su'aalo ka qabtid COVID-19 ama aad u baahan tahay caawimaad sameynta ballan tallaal, fadlan wac 1-800-525-0127 oo taabo #. Markay jawaabayaan, u sheeg luqaddaada si aad ugu hesho adeegyo turjumaan. khadka tooska ah wuxuu u furanyahay si maalinle ah saacadihiisa waxa lagu liisteeyay websaaytka Department of Health’s (kaliya Ingiriisi).
Ka warbixi dhibaato ganacsi
Ganacsiyada waxaa looga baahan yahay inay qaadaan talaabooyin ku habboon caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha iyo macaamiisha. Haddii aad rabto inaad ka warbixiso dhibaato, fadlan wac nambarka khadka tooska ah ee COVID-19 si aad uga caawiso luuqadaada. Qof ayaa ku weydiin doona su'aalo ku saabsan dhibaatada wuxuuna kuu soo gudbin doonaa cabasho adiga oo ku matalaya. Looma baahna inaad la wadaagto magacaaga ama macluumaadka xidhiidhka si aad u soo gudbiso cabasho.
Waxaad sidoo kale ku gudbisan kartaa cabasho Ingiriisi Kaga warbixi boga dhibaatooyinka ee COVID-19.
Fadlan ogow haddii aad bixiso magacaaga ama macluumaadkaaga xidhidhka, waa la sheegi karaa haddii qof fayl gareeyo diiwaanka dadweynaha uu ka codsado macluumaadkaas. Diwaanada la sharaxay Ogeysiiska Sirta guddoomiyaha (oo keliya Ingiriisi) ayaa lasiin dayn doonaa kolba siduu ugu baahdo gobolku Xeerka Diwaanka Dadwaynaha, RCW 42.56.
Caawinaad dheeraad ah oo la siiyo shaqaalaha, ganacsiyada iyo ururada
Iyadoo la isticmaalayo adeegyada tarjumaadda, khadka tooska ah wuxuu kuu tilmaami karaa hagitaan guud iyo ilaha. Sidoo kale waxay kaa caawin kartaa COVID-19 ganacsiyada iyo foomka su'aalaha shaqaalaha hadii aad wali wax su'aal ah hayso. Waxaa lagu weydiin doonaa macluumaadka xidhiidhka si aad jawaab u hesho.
Talaalka Korona fayraska (COVID-19)
Si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan tallaalada COVID-19, fadlan booqo bogga Tallaalka COVID-19
WA ogeysiisyada gaadhista abka casriga ah
Haddii aad rabto in aad ogaato waxbadan oo kusaabsan WA Notify, oo ay kujirto sida loogu daro taleefoonkaada, booqo WANotify.org
Macluumaadka la Xiriira Shaqaaleysiinta & Ganacsiga
Kabka Shaqo La'aanta
Hadii aad weydo shaqadaada, waxaad heli kartaa kabka shaqo la'aanta. Hadii aad u baahan tahay macluumaad ku sahabsan sida loo buuxiyo codsiga kabka shaqo la'aanta, waxaad wici kartaa 1-800-318-6022. Markay ka jawaabaan, sheeg luuqadaada si aad u heshid adeegyada turjumaada.
Shaqaalaha iyo Xaqlayaasha Ganacsiga
Xanuunka karoonafayras wuxuu saameeyey boqolaal kun oo shaqaale iyo shaqaaleysiiyayaal gobolkeena ah.
Si loo badbaadiyo shaqaalaha, shaqaaleysiiyayaasha waxa looga baahan yahay in ay:
Wax kaga baraan shaqaalahooda calaamadaha iyo astaamaha COVID-19 luuqad ay fahmayaan.
Hirgaliyaan qorshe kala fogaansho bulsho.
Fuliyaan nadiifin iyo neermis dilis joogto ah.
Hubiyaan gacmo dhaqis joogto ah oo saxa.
Hubiyaan in shaqaalaha bukaa guryaha joogaan.
Jawaabaha su'aalaha guud ee ku saabsan fasaxa jirada ee la bixiyo, magdhawga shaqaalaha iyo soo koobida shuruudaha amniga goobta shaqada waxaa laga heli karaa Department of Labor & Industries oo ku qoran luqado badan.
Hadii aad ka qabto walaacyo badqabka goobtaada shaqada, waxaad gudbin kartaa cabasho adoo u wacaya si toosa Department of Labor & Industries 800-423-7233. Adeegyada turjumaada tilifoonku waa diyaar.
Hadii aad su'aalo ka qabtid ganacsigaaga iyo shaqaalahaaga inta lagu jiro COVID-19, waxaad ka wici kartaa Waaxda Amniga Shaqaalaha 855-829-9243.
Macluumaadka Caymiska Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka
Waxaad bilaash ama qiime hoose ku heli kartaa caymiska caafimaadka. Ka wac Health Care Authority 1-855-923-4633. Markay ka jawaabaan, sheeg luuqadaada si aad u heshid adeegyada turjumaada.
Alien Emergency Medical (AEM) Caymiska waa barnaamij loogu talo galay shakhsiyaadka leh xaalad caafimaad oo ku haboon oo aan buuxin shuruudaha muwaadinimo ama muhaarijinimo, ama ku haboon dadka aan buuxin shuruuda 5-sano.
Khadka Help Me Grow Washington ee 1-800-322-2588 wuxuu aqoonsan karaa barnaamijyada caafimaadka kala duwan iyo adeegyada aad ku haboon tahay wuxuuna kaa caawinaya inaad codsatid. Tani waxa ku jirta:
WIC (Barnaamijka Dumarka, Caruurta & Nafaqda Caruurta)
Caymiska Caafimaadka Caruurta, dumarka xaamilada ah iyo dadka waaweyn
Xakameynta dhalmada ee Barnaamijka Kamasuul noqo
Shaybaadhada caafimaadka iyo kala korinta qoyska
Alaabta xaamilada iyo cunuga
Waxay sidoo kale hayaan barnaamijyo cunto iyo macluumaad.
Macluumaadka Muhaajiriinta iyo Qaxootiga
Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) wuxuu ka caawiyaa soo galootiga inay fahmaan muhiimada xaqiiqooyinka ku saabsan COVID-19 iyo welwelka soo galootiga. Waxyaabo kale oo muhiim ah inaad igaatid:
Cisbitaalada iyo shaybaadhada looma ogola in ay la wadaagaan xaalada muwaadiniinta iyo muhaajiriinta ICE.
Helida baadhista COVID-19 iyo helitaanka daryeelka saqada ama qiimo dhismista ah ee caafimaad ma saameyn doonaan awoodaada inaad codsatid kaadhka cagaaran ama muwaadinimo.
Waxaad u baahan tahay lambarka adeegyada asaasiga ah ee bulshada si aad u codsatid kabka shaqo la'aanta. Hadii aad rabtid inaad qof kala hadashid helitaanka kabka shaqo la'aanta wac 1-800-318-6022.
Helitaanka kabka shaqo la'aantu ma khatar galin doono awoodaada codsashada kaadhka cagaaran ama muwaadinimada ee hoos yimaada Shuruucda Lacagaha Dadweynaha.
Waxaad ku haboonaan kartaa Fasaxa Mushaharka leh ee Caafimaadka iyo Qoyska ee Gobolka Washington si aad u daryeeshid qof u xanuusanaya COVID-19 ama u daryeeshid naftaada hadii aad qabtid fayraska. Uma baahnid lambarka adeega asaasiga ah ee bulshada si aad u heshid kabkan. ESD waxay aqbashaa noocyo badan oo dukumentiyo ah.
Haddii aad tahay milkiile ganacsi oo caawimaad raadinaya, codsashada amaah degdeg ah oo laga helo Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Federaalka khatar gelin doonin awooddaada helitaanka kaarka degenaanshaha ama dhalashada.
Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) wuxuu kugula talinayaa hadii aadan hubin xaaladaada ama tan xubin qoyskaaga ah, ama dheefahaaga, laxiriir garyaqaanka laanta socdaalka, sarkaalka laanta socdaalka ama wakiil ay aqoonsatay Department of Justice (DOJ). Waxaad awoodi kartaa inaad ka hesho qareen adoo adeegsanaya Ururka Qareenada Socdaalka Mareykanka, ama waxaad booqan kartaa websaydhka hay'adda la aqoonsan yahay ee DOJ.
OIRA wuxuu leeyahay barnaamijyo lagaga caawinayo qaxootiga iyo muhaajiriinta:
Shaqo raadinta iyo tababaro:
Tababo barida Dhalinyarada.
Caawimada qaxootiga dadka waaweyn ah, caruurta, ardeyda, iyo dadka kale.
Barnaamijyo joogto ah oo u furan qaabka onlaaynka ah inta lagu jiro COVID-19. Xafiisku wuxuu leeyahay adeegyo cusub si oo kaaga caawiyo inaad codsatid shaqooyinka ama shaqo la'aanta, taageerada waxbarashada, iyo caawinta kirada. Ku haboonaanshaha Caawimada Lacagta ee Qaxootiga iyo Caawimada Qaxxotiga ee Caafimaadka waxa la kordhiyey ilaa Sabteembar 30, 2020.
Adeegyada iyo macluumaad dheeriya, wac 360-890-0691.
Su'aalaha ku sahabsan xuquuqda muhaajiriinta, helida caawimada gudbinta ee qaraabada/ asxaabta la xiray, iyo macluumaadka kale ee la xiriira, waxaad la xiriiri kartaa Khadka Shabakada Muhaajiriinta ee Washington 1-844-724-3737. Turjumaada tilifoonku waa diyaar.
Caafimaadka Maskaxda iyo Dareenka
Wakhtigani wuxuu noqon karaa mid warwar leh. Waa caadi in adiga ama kuwa aad jeceshahay ay dareemaan walaac, murugo, cabsi ama cadho. Kaligaa ma tihid. Waa caadi inaad raadisid oo weydiisid caawimo.
Qofkastaaba si khaasa ayuu uga falceliyaa walaaca iyo xaaladaha adag. Shayga ugu muhiimsan ee aad sameyn kartaa waa inaad daryeeshid naftaada, qoyskaaga, iyo bulshadaada intii aad awoodid.
Maxaa kaa caawiya inaad la tacaashid wakhtiyadan adag inta lagu jiro? Miyaad la xiriirtay oo la hadashay asxaabta iyo qoyska? Laga yaabaa neef qaadasho dheer iyo iskala bixin, waxoogaa jimicsi ah, ama hurdo kugu filan? Wakhti u sameynta daryeelka naftaada, haseyeeshee taasi way ku daryeeli kartaa, waxayna kaa yareyn kartaa walaaca.
Ka wac Washington Listens 1-833-681-0211. Adeegyada turjumaada tilifoonku waa diyaar. Iyadoo laga jawaabayo xanuunka COVID-19, Washington waxay bilowday barnaamijka caawimada ee loogu yeedho Washington Listens. Dadka isticmaala adeegyada Washington Listens waxay helaan caawimo si ay u maamulaan warwarka ulana tacaalaan isbadalan uu keenay COVID-19. Washington Listens wuxuu diyaar u yahay qofkasta oo ku nool Washington inuu la hadlo khabiir taageera. Soo wacayaashu waxay helaan caawimo iyo isku xidh macluumaadka bulshada goobta ah. Barnaamijku waa qarsoodi.
Hadii aad mushkilad ku jirtid oo aad u baahan tahay inaad la hadashid qof si aad u heshid talo, waxa jira ikhtiyaaro kooban.
Disaster Distress Helpline wuxuu bixiyaa la talin mushkiladaha degdega ah ee dadka waajahaya walaac dareen oo la xiriira masiibo dabiiciya ama binaadam sababay Wac 1 800-985-5990. Markay ka jawaabaan, sheeg luuqadaada si aad u heshid adeegyada turjumaada. Khadka caawimadu waa diyaar 24 saac maalin kasta.
Crisis Connections waxay leedahay 24 saac oo Khadka Mushkilad xalinta ah oo siiya caawimo degdega shakhsiyaadka, qoysaska, iyo asxaabta dadka ku jira mushkilado dareen. Waxay u adeegtaa dadka ku nool Degmada King. Turjumaada luuqadu waa diyaar. Wac 1-866-427-4747.
National Suicide Prevention Lifeline wuxuu siiyaa ka hortaga iyo macluumaadka mushkiladaha dadka ka fikiraaya isbiimaynta. Kuwa aad jeceshahay waxay sidoo kale wici karaan khadka caawimada si ay helaan macluumaad ay ku caawiyaan qoysaskooda iyo asxaabtooda. Wac 1-800-273-8255. Khadkan caawimadu wuxuu diyaar yahay 24 saac maalintiiba, 7 cisho todobaadkiiba. Waxa jira khad gaara oo loogu talo galay caawimada shaqaalaha dawlada. Wac 1-800-273-8255 oo ka dib taabo 1. Hadii aad naafo ka tahay maqalka, wac1-800-799-4889.
Hadii aad leedahay ilmo dadiisu tahay 18 ama ka yar waxay ka heli karaan cunto bilaasha dugsiyada. Dadka waaweyn ee naafada ah ee ka diwaan gashan barnaamijyada waxbarashadu waxay sidoo kale ku haboonaan karaan cuntooyinka dugsiyada. Xaalado badan, cuntooyinkani waxa la keenaa ama la soo dhigaa goobaha dugsiga sida istaanka baska. La xiriir degmada dugsigaaga si aad u ogaatid in ay bixiyaan cuntooyin bilaasha.
Kuwa xaamilada ah, hooyooyinka cusub iyo caruurta ka yar da'da shan sano, waxaad awoodi kartaa inaad ka heshid cunto Barnaamijka Department of Health’s Dumarka, Sabiyada iyo Caruurta (WIC). Caawimada luuqada, wac 1-866-632-9992.
Goobaha cuntooyinku waxay badeleen saacadahooda ama waxay u guureen in socodka laga qaato maxaa yeelay dalab cuntoo kordhay intii lagu jiray COVID-19. Fadlan wac ka hor intaanad tagin. Northwest Harvest waa shabakad cuntoo wadankoo dhan ah. Ku qor magaca magaaladaada sanduuqa dhanka bidix ee sanduuqa giriinka shabakada.
Hadii aad ku nooshahay Bariga Washington waxaad ka heli kartaa liiska goobaha cuntooyinka Second Harvest. Ka dooro degmadaada shabakadan liiska goobaha cuntada ee goobtaada.
Kaadhadhka kabka asaasiga ah ee cuntada
Kaadhadhka kabka asaasiga ah ee cuntada (EBT) waxa loo isticmaali karaa in lagu iibsado. Muwaadiniinta Marakaynka way codsan karaan kabkan Boga Asaasiga ah ee Cuntada ku saabsan Wabsaaytka Waaxda Adeegyada Bulshada iyo Caafimaadka (Department of Social and Health Services) ee Gobolka Washington (DSHS).
Fiiro gaar ah: Dowlada dhexe waxay hakisay shuruud shaqo oo khusaysay dadka qaangaadhka ah intii lagu jiray dhibaatadan. Si kastaba ha ahaatee, dawlada fedaraalku waxay ku baahantahay inaad noqoto muwaadin Marakayn ah si aad ugu qalanto kabkan.
Kaadhadhka nooca-deynta ah sida kuwa kor lagu sharaxay waxaa heli kara dad badan oo aan muwaadiniin ahayn oo buuxiya dhammaan shuruudaha kale ee barnaamijka. Waxaad codsan kartaa kabkan oo la socoto DSHS Barnaamijka Kaalmada Cunnada Gobolka (Ingiriisi kaliya).
Macluumaadka iyo Khayraadka Qoysaska
Kani waa wakhti warwar ku leh dhamaan qoyska. Halkan waxa ah waxoogaa talooyinka sida loola tacaalayo xaaladan iyo caruurtaada.
Ku qabo doodo qoys meel ku haboon oo ku dhiiri gali xubnaha qoysku in ay su'aalo is weydiiyaan. Tixgali la yeelashada doodo gaara caruurta yaryar si ay u isticmaalaan luuqada ay fahmi karaan oo ay wax uga taabtaan meela u gaarka ah iyo fahanka khaldan.
Inkastoo aad u baahan tahay inaad wax ogaatid, yaree isticmaalka warbaahinta ama baraha bulshada ee keeni kara baqdin ama argagax. Si gaara uga war hay (oo xadid) sida wakhtiga warbaahinta ama baraha bulshada caruurtaadu u isticmaalayso ee khuseysa xanuunka.
Diirada saar caawimada carruurta adigoo ku dhiiragelinaya inay su'aalo kana caawinaya inay fahmaan xaalada hadda jirta:
Kala hadal dareenkooda oo u sax.
Ka caawi inay muujiyaan dareenkooda iyagoo isticmaalaya sawirro ama nashaadyo kale.
U caddeey faahfaahinada khaldan ama isfaham la'aanta ku saabsan sida fayrasku uu u fido iyo in cudur kasta oo neefmareenka ku dhaca uusan ahayn xudunta karoonafayras COVID-19.
U nasteexeey oo sii dulqaad yar oo dheeraad ah.
Si joogto ah oo dhow ula soco ama u hubi carruurtaada ama marka ay xaaladdu isbaddesho.
Ka dhig jadwalka qoyskaaga mid joogto ah hadday tahay wakhtiga jiifka, cuntada iyo jimicsiga.
Waqti u keydi oo aad ku samaysaan waxyabaha adiga iyo qoyskaagaba idin dareensiiya marka aad ku jirtiin xaaladaha kale ee walaaca leh, sida aqriska, daawashada filimada, dhageysiga muusikada, ciyaarista ciyaaro, jimicsiga ama ka qeybqaadashada howlaha diinta (salaadda, ka qeybqaadashada adeegyada interneetka).
Ogoow in dareenada ay ka mid yihiin keli ahaanta, caajisnimada, cabsida ah in cudurka la qaado, welwel, walaac iyo argagaxa ay yihiin falcelin iskacaadiga ah oo ku aadan xaalad welwel leh sida xanuunka.
Ka caawi qoyskaaga in ay ku lugyeeshaan dhaqdhaqaaqyo farxad leh oo micno leh joogtana u ah qoyskaaga iyo qiimaha dhaqankaaga.
Khayraad iyo Macluumaad Dheeraada
Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington – Boga Karoonafayras
Liiska lambarada tilifoonada iyo adeegyada Waakalada Gobolka Washington
Caawimada Amaahda Guryaha ee Dadka Degan Washington
Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada - bogga COVID-19
Miyaad caawimo uga baahan tahay biilka biyaha iyo laydhka? Hadii aanad awoodin inaad bixisid biilka korontada, gaaska ama biyaha inta lagu jiro xanuunka COVID-19, caawimo ayaa la heli karaa.
Soo Sheeg Naceybka/Midabtakoorka